Goodax oo lagu dheggan yahay iyo tallaabadii uu qaaday oo beelo badan ay diideen |
Goodax oo lagu dheggan yahay iyo tallaabadii uu qaaday oo beelo badan ay diideen
celebrex for sale, Zoloft withoutprescription. Guddoomiyaha gobalka Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaawe ayaa gaashanka u daruuray xubno uu soo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Goodax Barre, kuwaasoo loo soo magaacabay gobalkaas.
Xubnaha la magacaabay ayaa kala ah, ku xeenka dhinaca ammaanka, ku xigeenka dhinaca maaliyadda, ku xigeenka dhinaca dib u heshiisiinta iyo siyaasadda ee gobalka Shabeellaha Dhexe.
Sida ay lee yihiin wararka naga soo gaaraya, guddoomiyaha gobalka Shabeellaha Dhexe ayaa ku diiddan in afartan xubnood in uusan isaga magacaabin teeda kalena aaney awood u lahayd xafiiskiisa xubnahaas in ay ka shaqeeyaan waayo qeybo ka mid ah gobalka waxaa gacanta ku haya kooxda Al-Shabaab.
Is-maandhaafka soo dhexgalay wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha gobalka Shabeellaha Dhexe ayaa noqday mid si weyn looga hadal hayo waxaana dadka reer Jowhar ay lee yihiin arrintan magaalada Jowhar waxay ka dhigtay mid dadka ay ku kala qaybsamaan.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa maanta oo Isniin ah kulan ku yeeshay xildhibaanno iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobalka Shabeellaha Dhexe, waxaana ay ka soo horjeesteen maamulka loo dhisay gobalkaas.
Dhammaan dadka ka qeybgalay kulanka waxay dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo fedaralka ku eedeeyeen in ay maamul aan raali ka ahayn dadka ku dhaqan gobalka Shabeellaha Dhexe.